Ukuphupha ngelahleko Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ilahleko ibangela buhlungu emntwini kuba enganikeli ngempahla yakhe ngokuzithandela. Kubuhlungu kakhulu ukuphulukana nento ebaluleke kakhulu kuwe.
Ilahleko inokuba yinto, umzekelo, isiqwenga sexabiso. Kodwa kwanezinto ezifanelekileyo ezinje ngobuhlobo okanye igama elihle zinokukhawuleza ziphele. Ngokuqinisekileyo eyona ilahleko ibuhlungu yile ukufa yomntu; Oku kusebenza kubo bobabini abantu abadala kunye nomntu omncinci kakhulu, umzekelo, kwimeko yokuphuma kwesisu. Amaqela akhethekileyo okuzinceda ahlala edibana ukujongana namava abuhlungu kangaka. Abantu abaninzi banentlungu enkulu ngokusweleka kweqabane labo iminyaka okanye amashumi eminyaka.
Iphupha, apho kukho into elahlekileyo, mhlawumbi lichukumisa iphupha ngokukodwa. Mhlawumbi uziva ngathi akukho nto unokuyenza malunga nelahleko. Oku kunokubangela umsindo, kodwa kunye nokuphelelwa lithemba. Imeko yobomi yangoku ibaluleke kakhulu ekutolikeni amaphupha.
Ilahleko inokubonakaliswa njengophawu lwephupha ngeendlela ezininzi. Umntu unokuphulukana namazinyo ephupheni, abone ukuphanga, okanye umangaliswe kukuba umntu anyamalale ngesiquphe. Ngoku funda konke malunga neemeko zamaphupha abantu abaninzi abaphuphayo abazifumana zinxulumene nelahleko:
1 Uphawu lwephupha «Ilahleko» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Ukuphulukana nomzimba: liphupha elingaqhelekanga.
1.1.1 Oyika! Ukuphulukana nawo onke amazinyo kwihlabathi lamaphupha.
1.1.2 Ewe: Ndiphupha malunga nokulahleka kweenwele
1.2 Xa izinto ziphela ephupheni
1.2.1 Iphi iselfowuni yam? Iselfowuni ilahlekile ephupheni.
1.2.2 Ukuphupha ngokulahlekelwa likhaya lakho
1.2.3 Ubusela beWallet yamaphupha-Misa isela!
1.2.4 Kuthetha ntoni ukulahleka kwesipaji ephupheni?
1.3 Ukuphulukana nomntu omthandayo okanye isilwanyana sasekhaya: uhlalutyo lwamaphupha
1.3.1 Ukutolikwa kwephupha: ukusweleka komntwana.
1.3.2 Umlingane wam akasekho! Xa isibini sinyamalala ephupheni
1.3.3 Xa isilwanyana esithandwayo singekho: ukutolikwa kwamaphupha
1.4 Amaphupha amaninzi ngokulahleka
1.4.1 Ngesiquphe awunakuthetha: ulahlekelwa lilizwi ephupheni
1.4.2 Uphawu lwephupha «ukulahleka kwememori»
2 Uphawu lwephupha «ilahleko» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ilahleko» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ilahleko» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Ilahleko» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Ukuphulukana nomzimba: liphupha elingaqhelekanga.
Oyika! Ukuphulukana nawo onke amazinyo kwihlabathi lamaphupha.
Ukuba umphuphi uphulukana nawo onke amazinyo kumava akhe ephupha, ngamanye amaxesha oko kubonisa ububi, isijwili kusapho okanye umqobo ekwenzeni ishishini. Amazinyo angaphambili amele abantwana okanye izalamane ezisondeleyo ephupheni.
Ukuba umphuphi ukhafula amazinyo awileyo, unokugula. Kungabanda ngokulula. Ukungakwazi ukumela iimfuno zomntu kubonakaliswa ngokukhafula amazinyo.
Ewe: Ndiphupha malunga nokulahleka kweenwele
Ukuba umntu uphupha ngokulahleka kweenwele, kufuneka kwahlulwe ukuba umphuphi yindoda okanye ngumfazi. Kwindoda, olu phawu luphupha luhlala lubonisa uloyiko lokuphulukana namandla. Umfazi, kwelinye icala, kusenokwenzeka ukuba alwe noloyiko olukhoyo ngalo mfanekiso wephupha okanye esoyika ukuyeka ukuba nomtsalane kwaye anele. Nokuba yeyiphi na indlela, kububulumko ukujamelana noloyiko kwaye uqonde okubaluleke ngokwenene ebomini.
Xa izinto ziphela ephupheni
Iphi iselfowuni yam? Iselfowuni ilahlekile ephupheni.
Iselfowuni luphawu lwamaphupha avele kuphela emaphupheni kumashumi ambalwa eminyaka, ayothusi, kuba kwakungekho zixhobo ngaphambili, ifowuni ephathekayo iyafana nokufumaneka rhoqo kunye nonxibelelwano. Ukuba uphulukana nesixhobo ephupheni, oku kungabonisa ukuba ukulala kuyonganyelwa kubomi bemihla ngemihla. Nangona kunjalo, ukuba iselfowuni ibiwe, umphuphi woyika ukukhutshwa ekuhlaleni kunye nesizungu.
Ukuphupha ngokulahlekelwa likhaya lakho
Indlu okanye indlu imele umntu ophuphayo ngokwakhe, ke ukuphulukana nendlu ephupheni kunokubonisa ukuba umntu ulahlekile. Amaxesha ngamaxesha, ukutolikwa okuxhaphakileyo kwamaphupha kuthi, nangona kunjalo, ukuba umphuphi, ngokulahlekanga ngokungathandabuzekiyo kwindawo yakhe yokuhlala, kufuneka aqwalasele ngakumbi iindleko zakhe zezemali kungekudala. Ngaphandle koko, banokwenza utyalomali olungenaxhala kwaye bathathe indawo.
Ubusela beWallet yamaphupha-Misa isela!
Amaphupha malunga nokurhoxiswa kwesipaji amele ukulahleka kwamandla kunye nefuthe. Usenokuba uzenzele ilahleko ngokungakhathali. Okanye wenze impazamo emsebenzini wakho kwaye walungisa la mava ephupheni. Nangona kunjalo, iphupha lokweba isipaji linokubonisa iingxaki kulwalamano kunye neqabane.
Kuthetha ntoni ukulahleka kwesipaji ephupheni?
Njengokuphupha umntu kufuneka amkele ukubiwa kwengxowa, emva koko ulahle unxibelelwano necala lakho lobufazi. Ukuba ufumana ibhegi elahlekileyo, umcimbi owonwabileyo nowothusayo sele uza kwenzeka. Ukuba ulahlekelwe yityesi enkulu enkulu kwaye inzima, isicwangciso sakho sokuhamba sinokutshatyalaliswa.
Ukuphulukana nomntu omthandayo okanye isilwanyana sasekhaya: uhlalutyo lwamaphupha
Ukutolikwa kwephupha: ukusweleka komntwana.
Ukuba iphupha lifumana ukuxhwilwa okanye ukunyamalala komntwana walo ebusuku, ekuqaleni liza koyika. Kwiindlela ezininzi zokutolika ngokwesiko, olu phawu luphupha lumele ulonwabo lwexesha elizayo Ikwanokuthetha ukuba unoloyiko lokwenene lokuphulukana: ukuphulukana nomntwana wakho okanye ukusilela ukuba ngumzali.
Umlingane wam akasekho! Xa isibini sinyamalala ephupheni
Uphawu lwephupha "ukuphulukana nomntu omthandayo" kuthetha uloyiko lokulahleka, okunokuthi kunxulunyaniswe nomntu oshiyekileyo ephupheni. Nangona kunjalo, inokuthetha ukuba kukho into elahlekileyo okanye woyika ukungakhathali. Kwelinye icala, ukuba ufuna umntu, ufuna isisombululo kwimpikiswano naloo mntu. Ukuphulukana neqabane lakho epakini, umzekelo, liphupha elihle: ulangazelela umzuzu ozolileyo wesibini. Ubomi bunokuxakeka kwaye bunoxinzelelo ngoku, ngoku ingalixesha elifanelekileyo lokuya eholideyini kwakhona!
Xa isilwanyana esithandwayo singekho: ukutolikwa kwamaphupha
Ukuphulukana nesilwanyana sakho asiyonto yothusayo yokwenyani. Abaphuphi abaninzi bavuka bemanzi ngumbilo kula mava aphupha. Ikati isephupheni lomhlobo. Ke ukuba uphulukana nekati kwindlu yakho yamaphupha, woyika ukuphulukana nomhlobo olungileyo okanye umntu omaziyo. Ukuba umntu uphupha inja ibaleka, ubaleka nabantu abangalunganga, iimeko okanye iimvakalelo. Intaka eye yabhabha ephupheni, umzekelo, iparakeet, ibonisa ukudana. Oku kuhlala kunjalo xa isilwanyana singabaleka ehokweni.
Amaphupha amaninzi ngokulahleka
Ngesiquphe awunakuthetha: ulahlekelwa lilizwi ephupheni
Uphawu lwephupha "alunakuthetha" lubonisa ukutolikwa kwephupha ukuba umntu uthambekele ekubeni athule ngezimvo neemvakalelo zakhe kubomi bokwenyani kwaye angabelani nabanye. Unokuthemba ukuba abanye baya kuba nakho ukusombulula iingxabano ngcono kunawe. Nabani na ophupha ngokungathethi aze aphulukane nelizwi lakhe angathanda ukutshintsha le nto. Umphuphi okanye umphuphi unokubona uphawu lwephupha njengesicelo sokunxibelelana ngakumbi kubomi bemihla ngemihla.
Uphawu lwephupha «ukulahleka kwememori»
Iphupha elijikeleza imemori ngokungalindelekanga likhomba iimeko ezithile ezilele ngaphambili. Kungenzeka ukuba umntu angathanda ukulibala imicimbi ethile, kwelinye icala, umphuphi unokoyika ukuba amava amnandi awasayi kubuya.
Uphawu lwephupha «ilahleko» - ukutolikwa ngokubanzi
"Ukuphulukana" nomfanekiso wephupha kunokubonisa amava abuhlungu kuhlalutyo lwamaphupha. Isalamane esisondeleyo kusenokwenzeka ukuba saswelekile. Ukuphulukana nokulala kunokuba ngumfuziselo Ukuzithemba ukuphakama ebuthongweni, obulahlekile ngenxa yempazamo. Kuxhomekeka kwimeko yobomi, uphawu lwephupha lunokutsalela ingqalelo kwinto yokuba abahlobo kunye noogxa abangasabonisi imbeko ephupheni, okanye uthando lwesibini alusenamandla kangako.
Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha luquka "ukulahleka" ngamanye amaxesha ngokunjalo. ukuhluleka. Mhlawumbi eli phupha liphose ithuba okanye alihlawule kakhulu kumhlobo. Iphupha lokuphulukana ngokubanzi lilumkisa iphupha lokungalibali abantu okanye amaxabiso, abalulekileyo kuye.
Ukuba uphulukana nokulahleka kwemali ephupheni, umzekelo xa uthengisa isitokhwe okanye ungcakaza, kuya kufuneka uqonde oku njengesilumkiso sokungenzi utyalomali olukhulu kubomi bokwenyani kungekudala. Ukungabinamandla okuphulukana nobudoda kunokubhekisa kuxinzelelo olusisigxina ekuvukeni kobomi xa ulele.
Uphawu lwephupha «ilahleko» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuphulukana ephupheni kukuchazwa kwengqondo ephupheni uphawu olucacileyo lokudideka kwengqondo kunye neemvakalelo. Ukuphupha ungazi nto kunengxaki yokoyika ilahleko. Iziphumo zezi ukungabi nako kunye nobunzima ekuthatheni isigqibo. Uphawu "lokuphulukana" nophawu lubonisa ukuba umphuphi woyika ukuphulukana nenxalenye yesiqu sakhe.
Ukuba inxenye yobuntu ifile ngenene, i-subconscious inokucela iphupha ukuba liyamkele. Ingakumbi ukulahleka kwemali kubonisa ekutolikeni kwamaphupha aphupha ubuchule obuthile okanye iipropati ulahlekile. Izixhobo ezingasetyenziswanga zeemvakalelo kunye nemikhosi yokuqhuba nayo inokubonakaliswa kwisimboli yephupha.
Ke ngoko, ngokwembono yengqondo, uhlobo lwelahleko ludlala indima ebalulekileyo ekutolikeni amaphupha. Ukuba iinwele okanye amazinyo awe ephupheni, uphawu lwephupha lubonisa uloyiko lokuyeka ukuba nomtsalane ngokwesondo. Zombini ezi mpawu zimele iimpawu zangaphandle ezibalulekileyo, ilahleko yazo ikwayi- ukunciphisa Okubandakanya amandla kunye namandla.
Isimboli yephupha "ukulahleka" kunokubonisa ukuhlaselwa ukuzithemba. Ngokwenkcazo yamaphupha, amaphupha anje aqhelekile kubantu abaya exesheni.
Uphawu lwephupha «ilahleko» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba eligqithisileyo, uphawu lwephupha "ilahleko" luphawula ukupheliswa kobuntwana, ngokokutsho kwayo yonke into ekhoyo inamalungu amabini.
Kwinkcazo yamaphupha, eli phupha libonisa Ukwahlulahlula Inxalenye yomoya wokomoya. Ngapha koko, iphupha eli lizabalazela ukukhanyiselwa ngengqondo yokuba lizama ukwenza ilahleko ngophando olunzulu.